UCL: Chelsea oo ku hungowday inay hoggaanka u qabato Guruubkeeda, xilli Kean uu ka yeelay Kooxdiisa Juventus inay kaalinta koowaad ku soo baxdo… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 08 Dis 2021. Chelsea ayaa ku hungowday inay hoggaanka u qabato Guruubkeeda, kaddib markii ay barbardhac 3-3 ah la galeen kooxda Zenit St. Petersburg, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada lixaad wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Zenit St. Petersburg.
Daqiiqadii 2-aad durba bilowga ciyaarta kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay weeraryahanka reer Germany ee Timo Werner kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis Christensen.
38 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Zenit St. Petersburg ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay laacibkooda Claudinho oo caawin ay kaga timid Douglas Santos.
Daqiiqadii 41-aad kooxda Zenit St. Petersburg ayaa markan hoggaanka u qabatay iyada oo 2-1 ka dhigay Sardar Azmoun waxaana caawinta goolkan loo diiwan galiyay laacibka reer Brazil ee Malcom.
Romelu Lukaku oo ay caawin kaga timid saaxiibkiis Timo Werner ayaa diiqadii 62-aad wuxuu ciyaarta ka dhigay barbardhac 2-2 ah.
85 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Timo Werner oo caawin ka helay saaxiibkiis Pulisic ayaa wuxuu hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Chelsea wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-3.
90 + 4 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Zenit St. Petersburg ayaa dhalisay goolka barbardhac waxaana 3-3 ka dhigay xiddigooda Magomed Ozdoyev.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-3 ay ku kala baxeen labada kooxood Zenit St. Petersburg kooxda Chelea, xilli kulankan uu ahaa kulankii lixaad ee ugu dambeeyay group-ka H, waxaana ka soo gudbay labada kooxood ee Juventus iyo Chelsea.
Dhinaca kale kooxda Juventus ayaa 1-0 kaga adkaatay kooxda Malmo FF, waxaana goolka qura u dhaliyay laacibkooda Moise Kean.